Puntland oo xukun ku riday rag Shabaab lagu eedeeyay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Puntland oo xukun ku riday rag Shabaab lagu eedeeyay
Puntland oo xukun ku riday rag Shabaab lagu eedeeyay
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Maamulka Puntland ayaa xukun waxa ay ku riday Saddex ruux oo lagu eedeeyay Shabaabnimo.
Raggaan ayaa Bishii August ee sanadkii la soo dhaafay waxaa lagu qabtay Dagaal ka dhacay Buuraha Golis ee Gobolka Bari, gaar ahaan aaga Galgala sida maxkamadda laga sheegay.
Xeer Ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Puntland Saciid Xirsi Ibraahim ayaa Maxkamadda ka dalbaday in saddex eedeysane lagu rido xukun dil toogasho ah, kadib markii deegaanada Puntland u tageen dhibaateynta shacabka.
Maxkamada darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida iyo dambiyada Culus ayaa laba ka mid ah ragaas oo lagu kala magacaabo Ismaaciil Cabdullaahi Ibraahim iyo Xasan Kuulow Ibraahim ku riday xukun ah xabsi daa’in.
Previous articleSAWIRRO: Guddoomiyaha Baarlamaanka K/Galbeed oo dib ugu laabtay Baydhabo
Next articleCiidamada NISA oo hawlgalo ka wada Degmada Beled Xaawo